बाउले बारीमा,छोराले घरमा एउटै महिलालाई गर्दा रहेछन(हेर्नुहोस भिडियो),अब आमा भन्ने कि श्रीमती? - Mitho Khabar
बाउले बारीमा,छोराले घरमा एउटै महिलालाई गर्दा रहेछन(हेर्नुहोस भिडियो),अब आमा भन्ने कि श्रीमती?
June 22, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on बाउले बारीमा,छोराले घरमा एउटै महिलालाई गर्दा रहेछन(हेर्नुहोस भिडियो),अब आमा भन्ने कि श्रीमती?
तर ती आमा छोराले बुहारीको कुरा नसुनेपछि गाउँलेलाई उनले आफ्नो घरको त्यस्तो घिनलाग्दो कुरा भन्न बाध्य भएकी रहिछन् । यो कुरा त्यही गाउँका एक जनाले भनेका हुन् । ती छिमेकीका अनुसार ती आमा र छोराको सम्बन्धको शुरुवात यसरी भएको रहेछ ।
सुन्दा पनि पत्याउने नसकिने घटना घटेको छ ओखलुंगामा । ओखलढुंगाको थाक्ले भन्ने ठाउँमा आफ्नै छोराको सम्बन्ध आफ्नै आमासंग रहेको कुरा जब बुहारीले थाहा पाईन् तब उनले गाउँलेहरुलाई भनिन् । उनको कुरा गाउँलेहरुले पत्याएनछन् ।
हरे शिव! बस दुर्घटनामा २७ जनाको मृत्यु ! दया भएकोले मात्र रिप लेख्नु होला!
अष्ट्रेलिया का’ण्डको नालिवेली , को हुन् ति युबती ? यस्तो छ वास्तविकता
January 22, 2020 February 4, 2020 mithokhabar